ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ဓာတ်ပုံကိုရေတွင်ရေစာထည့်ပုံ🥇 Emulator.online ▷🥇
ဓာတ်ပုံတွင်ရေစာထည့်ခြင်းသည်သင်၏အမည် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပုံနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏လိုဂိုကိုအဆင့်အနည်းငယ်အတွင်းထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသောပရိုဂရမ်များနှင့် application များစွာရှိသည်။ မည်မျှရိုးရှင်းကြောင်းကြည့်ပါ။
သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိဓာတ်ပုံပေါ်ရှိရေစာအမှတ်အသားကိုထည့်ရန် PicsArt အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုကြစို့။ အခမဲ့ဖြစ်သည့်အပြင်ရုပ်ပုံနှင့်စာသားနှစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မလုပ်ဆောင်မီ၊ သင်၏ Android သို့မဟုတ် iPhone စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကို download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
1. PicsArt ကိုဖွင့်ပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သင့် Gmail (သို့) Facebook အသုံးပြုသူအချက်အလက်နဲ့ log in လုပ်ပါ။
အက်ပ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်အကြံပြုချက်တစ်ခုကိုသင်တွေ့ပါက၊ ကိုအသာပုတ်ပါ Xများသောအားဖြင့်ကြော်ငြာကိုပိတ်ရန်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်တွင်တည်ရှိသည်။ watermark ထည့်ရန်ရွေးစရာကို ၀ န်ဆောင်မှု၏အခမဲ့အရင်းအမြစ်များမှရရှိနိုင်သည်။
2. မူလမြင်ကွင်းတွင်၊ ကိုထိပါ + စတင်ရန်;
3. သင်ရေစာထည့်လိုသည့်ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။ သင်မမြင်ရလျှင်သွားပါ ဓါတ်ပုံအားလုံး သင်၏စက်ရှိဓါတ်ပုံအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်၊
4. လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ပုံ၏အောက်ခြေရှိ toolbar ကိုဆွဲချပါ။ ကျွန်တော်ထိမိခဲ့တယ် စာသားမ;
5. ထို့နောက်သင်၏အမည်သို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုရေးပါ။ စစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ check icon (✔) ကိုအသာပုတ်ပါ။
6. သင်စတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီစာသားကိုအလိုရှိသောနေရာတွင်ထားပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်စာသားကွက်ကိုထိ။ ဆွဲချပါ။
7. ယခုသင်သည်စာတည်းဖြတ်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပြီးရေစာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာမှထွက်ခွာရမည်။ အောက်ပါအရင်းအမြစ်များကိုရရှိနိုင်သည်။
အရောင်ဖြေ - နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း၊ စာလုံးရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းနိုင်တယ်။ မကြာမီတွင် gradient နှင့် texture ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်စရာများရှိနေသေးသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Edge: အက္ခရာပေါ်တွင် border တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်၎င်း၏အထူကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် (ဘားတွင်ဖြစ်သည် အရေအတွက်);
ဒီလိုပါပဲစာသားရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ပုံ၏မြင်ကွင်းကိုအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲရေစာကိုသိမ်မွေ့စွာဖြည့်စွက်ထားသည်။
အရိပ်: အက္ခရာ shading ထည့်သွင်းရန် function ကို။ ၎င်းသည်အရိပ်အတွက်အရောင်ရွေးချယ်ရန်နှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အနေအထားကိုညှိရန်ခွင့်ပြုသည်;
Buenos: ဘား၌သတ်မှတ်ထားသောထောင့်အရသိရသည်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများအတွက်အဖြစ်များတတ်သည်ထည့် ခေါက်ရန်။ သင်၌ရှိသည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေနိုင်သည်။
8. တည်းဖြတ်ပြီးရင် screen ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ check icon (✔) ကိုသွားပါ။
10 ။ နောက်မျက်နှာပြင်တွင်သွားပါ ကယ်ဆယ် ပြီးတော့၌တည်၏ သင့်စက်ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ။ သင်၏ပုံကိုသင်၏စမတ်ဖုန်း၏ပြခန်းသို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
PicsArt သည်သင့်ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ကိုသင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရိုက်ထည့်ရုံသာမဟုတ်ဘဲသင်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၏ပထမဆုံး logo တွင် JPG ၌သင်၏ logo ပုံရိပ်ကိုထားရန်လိုအပ်သည် ပြတိုက် o စာကြည့်တိုက် ဆဲလ်ဖုန်း။
ဒါကြောင့်ပဲလိုက်နာပါ အဆင့် ၁ မှ ၃အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးနောက်ကိရိယာဗန်းပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ။ လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီးအတည်ပြုပါ ပေါင်း.
စာသားများကဲ့သို့ပင်သင် နှိပ်၍ ဆွဲယူခြင်းဖြင့်ဖြည့်ထားသောပုံ၏အနေအထားနှင့်အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ အချိုးအစားများထိန်းသိမ်းထားစဉ်အရွယ်အစားပြောင်းလဲရန်, သင်က double- ခေါင်းစဉ်မြှား icon ကိုရွေးချယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိုဂိုနေရာချ, option ကိုသွား ဒီလိုပါပဲမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကပုံရိပ်ကိုမနှောင့်ယှက်နိုင်အောင်မြင်သာအောင်ပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုညာဘက်ရှိမျက်နှာပြင်ထိပ်ပိုင်းရှိအတည်ပြုသင်္ကေတ (✔) ဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
ရလဒ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိမြှားပုံခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်သို့သွားပါ ကယ်ဆယ်။ အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အတည်ပြုပါ သင့်စက်ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ.
နောက်သင်ခန်းစာတွင် iLoveIMG ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ရေစာများကိုပုံများနှင့်စာသားနှစ်ခုလုံးတွင်ထည့်သွင်းခြင်းအပြင်အရွယ်အစားနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အလွယ်တကူမှတ်နိုင်သည်။
1. သင်ရွေးချယ်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ iLoveIMG watermark tool ကိုရယူပါ။
2. ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ရုပ်ပုံများကိုရွေးချယ်ပါ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရေစာထည့်လိုသည့်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ။
3. watermarks ကိုပုံများနှင့်စာသားများအတွင်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
က) ပုံတွင် သင်၏ကုမ္ပဏီလိုဂိုကဲ့သို့သောရုပ်ပုံများထည့်လိုပါကကိုနှိပ်ပါ ပုံထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိပုံကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒုတိယ) စာသားထဲမှာ: ကိုနှိပ်ပါ စာသားထည့်။ သင်လိုချင်သောစာသား၊ ဥပမာသင့်နာမည်သို့မဟုတ်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရေးပါ။ အောက်ပါစာသားများကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် -
Estilo: bold font (ဒုတိယ) စာလုံးစောင်းyo) နှင့်မျဉ်းသား (U);
အက္ခရာအရောင်နှင့်ကျန်ရှိသော: အက္ခရာအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည် UN
Formatting: သုံးလိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအိုင်ကွန်တွင်စာသားကို ဗဟိုပြု၍ ဖြစ်စေ၊
4. ထို့နောက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စာသားအကွက်ကိုအလိုရှိရာနေရာတွင် နှိပ်၍ ဆွဲခြင်းဖြင့်ထည့်ပါ။ အရွယ်အစားပြောင်းလဲလိုပါကအနားရှိစက်ဝိုင်းများကိုသာ နှိပ်၍ ဆွဲပါ။
5. opacity ကိုညှိရန်ရင်ပြင်အတွင်းရှိစတုရန်းလေးထောင့်ကွက်ပါလေးထောင့်ကွက်ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်သို့လျှော့ချနိုင်သည့်ဘားတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
6. သင်သည်အခြားပုံများတွင်တူညီသောရေစာမှတ်ကိုထည့်လိုပါက၊ ကိုနှိပ်ပါ +, ဓာတ်ပုံ၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်။ ထို့နောက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအခြားပုံများကိုရွေးချယ်ပါ။
တစ်ခုချင်းစီကို နှိပ်၍ app သည်မည်သည့်ပုံသဏ္seeာန်တူမည်ကိုကြည့်။ လိုအပ်ပါကတစ် ဦး ချင်းစီကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
7. ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ရေစာပုံများ၊
8. ဖိုင်ကို Download လုပ်ပါ ရေစာပုံများကိုကူးယူပါ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာ watermark ကိုထည့်သွင်းလိုက်ရင်၊ .zip format နဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲကိုကူးယူလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လိုပါကတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ငွေမပေးလိုပါက Paint 3D ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်က Windows 10 အတွက်ဇာတိဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာ၌ဤဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပါကသင့်တွင် software လည်းရှိနိုင်သည်။
ယခင်ရွေးချယ်မှုများနှင့်မတူဘဲ opacity ကိုပြောင်းလဲရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုသိမ်မွေ့သောရလဒ်ကိုရလိုပါက၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြေရှင်းနည်းအချို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကပိုကောင်းပါသည်။
1. ပွင့်လင်း Paint 3D;
2. ကိုနှိပ်ပါ မီနူး;
3. ထို့နောက်သွားပါ ထည့်သွင်း သင် watermark ထားလိုသည့်ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ။
4. ပရိုဂရမ်တွင်ဓာတ်ပုံဖွင့်ပါကကိုနှိပ်ပါ စာသားမ;
5. ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီး watermark စာသားကိုထည့်ပါ။ ဖန်သားပြင်၏ညာဘက်ထောင့်တွင်စာသားလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးချရန်ပထမဆုံးစာသားကို mouse ဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
3D သို့မဟုတ် 2D စာသား- သင် 3D View သို့မဟုတ် Mixed Reality လုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကထူးခြားမှုရှိလိမ့်မည်။
စာသားပုံစံ: bold (N), စာလုံးစောင်း (yo) နှင့်မျဉ်းသား (S)
နောက်ခံဖြည့်ပါ- စာသားကိုနောက်ခံအရောင်ရှိစေလိုလျှင်။ ဤကိစ္စတွင်သင်လိုချင်သောအရိပ်ကို၎င်းဘေးရှိအကွက်ထဲတွင်ရွေးရန်လိုအပ်သည်။
6. သင်လိုချင်သည့်စာသားကိုနေရာချရန်၊ အကွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ စာသားအကွက်ကိုအရွယ်အစားပြောင်းရန်နယ်စပ်ရှိရင်ပြင်များကိုကလစ် နှိပ်၍ ဆွဲယူပါ။
7. သင်သည်စာသားအကွက်အပြင်ဘက်ကို နှိပ်၍ သို့မဟုတ် Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည်ထည့်သွင်းသည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီး ပြင်ဆင်၍ မရတော့ပါ။
8. နိဂုံးချုပ်ရန်၊ လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။ Menu ကို→ As As → Image ကိုသိမ်းပါ။ သင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်ပြီးအဆုံးသတ်ပါ ကယ်ဆယ်.
သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏လိုဂိုကိုအသုံးပြုလိုပါက၊ အဆင့် 1,2နှင့်3နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပါ၊ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ပုံကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြထားသောချိန်ညှိပါ6ခြေလှမ်း နှင့်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသိမ်းဆည်းပါ 8 ခြေလှမ်း.
နှုတ်ကပတ်တော်၌ letterheads လုပ်နည်း
'Photoshop' အွန်လိုင်း - အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူများကိုရွေးချယ်ပါ